कस्तो तेल स्वस्थकर ? - Naya Patrika
कस्तो तेल स्वस्थकर ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं | असोज २१, २०७४
चाडबाडमा तेलको प्रयोग धेरै हुने गर्छ । सबै परिकार तेलमा तारेर तयार पारिन्छ । बजारबाट किनिएका प्याकिङ आइटममा पनि फ्याटको मात्रा बढी नै हुन्छ । दूधजन्य परिकारमा पनि फ्याटको मात्रा हुन्छ । खासमा भान्सामा कस्तो तेल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ?
डा. मिलनप्रकाश श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ
बोसो तथा दूधबाट बनेका परिकारमा पनि स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा हुन्छ । बेक गरिएका र बढी फ्राइड परिकारमा पनि यस्तो फ्याट बढी हुन्छ । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनका अनुसार आफूलाई चाहिने दैनिक क्यालोरीमध्ये स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हु“दैन । नरिवलको तेलमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा बढी हुने भएकाले प्रयोग नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
स्याचुरेटेड फ्याटको तुलनामा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट केही राम्रो हुन्छ । जैतुन, बदाम, तिललगायतको तेलमा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट बढी हुन्छ । मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याटले रगतमा नराम्रो कोलेस्ट्रोल बढ्न नदिने र राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने गर्छ । एभोकाडो, पिनट, बटर, आलसको गेडालगायतमा पनि यस्तो फ्याट बढी पाइन्छ ।
यो राम्रो किसिमको चिल्लो हो । पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटले नराम्रो कोलेस्ट्रोल घटाई राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउन मद्दत गर्छ । सोयाबिन, मकै, सनफ्लावरलगायतको तेलमा पाइने पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटले शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन ‘ई’का साथै एन्टिअक्सिडेन्टको आवश्यकता पनि पूरा गर्छ । यसले शरीरमा उत्पादन नहुने ओमेगा–३ तथा ओमेगा–६ फ्याटी एसिडको आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न मद्दत गर्छ ।